Sedbursiga beelaha qaar ee qeybsiga diblomaasiyiinta iyo ergooyinka Somalia u jooga dibada… – Hagaag.com
Sedbursiga beelaha qaar ee qeybsiga diblomaasiyiinta iyo ergooyinka Somalia u jooga dibada…
Posted on 26 Maajo 2019 by Admin in Articles // 0 Comments
Haddii ay run tahay warqad sir ah oo aan arkay oo laga helay wasaarada arrimaha dibada oo ka hadleysay sida qabaa’ilada u kala heleen qeybsiga diblomaasiyiinta Somalia u jooga dibada iyo ergooyinka.
Cadaalada ayaa ah rukun aasaasi ah ee dowladi ku dhaqanto, haddii la waayana wixii dhici jiray baa dhacaya oo waa lagu kala tagayaa wadankaasi, ileen waxaa laga weecday sharciga Ilaahay oo ah qofna inuusan qof kale ka shaqsiyad fiicneyn oo aan ka laan dheersaneyn, Ilaahay agtiisana dadka ay wada siman yihiin.
Hadaba waxaa wax lagu qeybsaday 5 beelood meel walba oo jagooyinka dowlada ka mid ah in ay dadkaasi iska arkaan oo aan dad khaas ah ama qabiil loo sed bursiin, waxaan arkay warqad ku xardhan qeybisga diblomaasiyiinta iyo ergooyinka ee qabaa’ilada.
Waxaa loo qeybiyey sidatan:
Beesha Daarood: 11 safiir, 2 ergo iyo 45 diblomaassi= 58 Diblomaasi.
Beesha Hawiye: 10 safiir, 1 ergo iyo 42 diblomaasi= 53 Diblomaasi.
Beesha Digil/Mirifle: 3 safiir, 1 ergo iyo 15 diblomaasi= 19 Diblomaasi.
Beesha dir: 4 safiir, 1 ergo iyo 19 diblomaasi= 24 Diblomaasi.
Beesha Shanaad: 5 safiir iyo 15 diblomaasi= 20
Haddii shaxdan aad ku fiirisid indho caafimaad qaba waxaa kaaga soo baxaya oo keliya waa dulmi .
Waxaan la hadlayaa beelaha lagu dulmay qeybsigan in ay ka dhiidhiyaan cadaalad daradan dalkan la degtay oo Ilaahay barakada ka qaaday oo ka soo horjeestaan dulmiga dadkooda lagu hayo, waxaad ku jirtaan golaha wasiirada, xildhibaano ayaad tihiin waa in aad ka hadashaan arrintan oo kale, ummada aad ka soo jeedaan waxay idin dooratay inaad usoo dhicisaan xaqooda.
Waxaan is weydiinayaa su’aalaha ah labada qabiil ee loo sed bursiiyey ma dadka ayey wax dheer yihiin, ma dadka ugu badan ee dalkan ayey yihiin, ma dhul weyn bey qabaan, ma dadkooda ayaa ka tacliin roon kuwan kale, mise waa la barakeystaa wajigooda. Ma garan.
Maxaa loo cuskaday oo sidan loogu qeybiyey, runtii Ma la aqbali karo farqi intaasi la eg oo u dhaxeeya beelaha.